सम्भोग अघि महिला-पुरूषले जान्नै पर्ने १० कुरा - PARIJATMEDIA
सम्भोग अघि महिला-पुरूषले जान्नै पर्ने १० कुरा
यौन मानिसका लागि आधारभूत आवश्यक्ता हो । तर, हाम्रो सामाजमा यौ’न जीवनलाई खुल्ला राखिएको छैन । यही अवस्थामा मानव जीवनको अनिवार्य आवश्यक्ताको रुपमा रहेको यौ’न जीवनलाई सहज र सफल कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामी प्रस्तुत गरेका छाै ।
यी १० उपाय जस्ले यौन जिवनलाई सफल बनाउन मद्दत पुर्याउछ
सम्भोगका बेला यदि जोडीको मुड खराब छ भने आफ्नो माया र स्पर्शले पहिले उसको मुडलाई सही ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्नुहोस् तर सम्भोगका लागि जोडी तयार नहुँदै कर गर्नु राम्रो हुँदैन ।
एक–अर्कामा शारीरिक एवं मानसिक रूपले बढी भन्दा बढी नजिक हुने प्रयास गर्नुहोस् ।
यौन सम्पर्कका बेला हरेक कुरालाई गम्भीर रूपले लिनु हुँदैन । अन्तरंग पलहरूलाई सधै ख्यालठट्टाको रूपमा लिनु उचित हुन्छ।
सम्भोगका विषयमा तपाईं वा जोडीको मनमा केही शंका भएमा पहिले त्यसलाई हटाएर मात्र सम्भोगको सिलसिला अघि बढाउनुपर्छ ।
सम्भोगका दौरानमा जोडीको सन्तुष्टिको ख्याल गर्नुहोस् ।
पर्याप्त आ’नन्द लिनका लागि तपाईं शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त हुनु आवश्यक छ । त्यसैले सधैं व्यायाम र सन्तुलित भोजन ग्रहण गरी तन्दुरुस्त रहनुहोस ।
सम्भोगका बेला पाक्क्रीडामा बढि जोड दिनुहोस् । यसले जोडीलाई बढी चरमसुख प्राप्त हुन्छ ।
सम्भोगका बेला कम बोल्नुहोस् र आफ्नो जोडीप्रति एकाग्र हुनुहोस् र उनका कुरा पनि सुन्नुहोस् ।
सम्भोगलाई निरन्तरता दिइराख्नुहोस् । सम्भोगमा धेरै अन्तराल राख्नु राम्रो होइन ।
हरेक सम्भोगका बेला आफ्नो जोडीको प्रशंसा गर्न नभुल्नुहोला ।
१. शरीरमा ला’परवाही
हरेक युवतीले विवाहपछि गुनासो गर्छन् । विशेषगरि पतिसमक्ष उनीहरुको गुनासो हुन्छ । तपाई पहिलाको जस्तो हुनुहुन्न । फेरिनुभयो जस्तो शव्द उनीहरुको नियमित बन्न जान्छ । विवाह पछि पनि व्यक्ति वा पुरुष पहिलाको जस्तै कसरी रहन सक्छ र ? भन्ने चाहिँ उनीहरुले सोच्दैनन् । त्यस्तै पुरुषले पनि युवतीमाथि सोच्ने गर्छ । महिला र पुरुष दुवै स्वतन्त्र भएको बेलाको जस्तो हुँदैनन् ।
पारिवारिक झमेला, सम्बन्ध र जिम्मेवारीले गर्दा सबै परिवर्तन हुन्छन् भन्ने दुबै पति र पत्नीले बुझ्ने हो भने समस्या नै पर्दैन । र दाम्पात्य जीवन सुखमय बन्नसक्छ।
Prevभारतीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई कोरोना संक्रमण
nextमहिलाले पुरुषमा खोज्छन् यी ५ कुरा !